IPirates ithungatha umgadli wokufika | News24
IPirates ithungatha umgadli wokufika
Durban - Umqeqeshi we-Orlando Pirates usenqume ukuphuma inqina ukuthungatha umgadli ongalibheki ipali ukuxazulula inkinga yokushalazela amapali kule kilabhu ezobhekana neBidvest Wits kowe-Absa Primiership ngoMgqibelo, eBidvest Stadium ngo-18:00.
UMilutin "Micho" Sredojevic ocija iBucs uthi uvuleke amehlo ezakhe zihlulwa yinqwaba yamathuba emdlalweni neCape Town City eziwunqobe ngo-1-0 wegoli likaThabo Qalinge odlala esiswini obungoLwesibili ebusuku e-FNB Stadium eGoli, kubika ILANGA.
IBucs igijime lo mdlalo ngaphandle komgadli wayo uThamsanqa "Gandaganda" Gabuza, obedonsa isigwebo samakhadi aphuzi.
"Sengizinike umsebenzi wokuthungatha umgadli futhi ngizosebenzisa ulwazi enginalo ngamazwe ase-Afrika ukumthola.
OLUNYE UDABA: Usuthu luqinisekise ukujoyinwa owe-Orlando Pirates
"Ngidonse kanzima njengoba uGabuza ebengekho, bengibamba ngiyeka ngingazi ngizothatha ini ngiyihlanganise nani. Kangithandi ukuba sesimweni esinjalo, ngifuna uma kukhona ongekho ngikwazi ukuphesha isikhala sakhe ngaphandle kwenkinga.
"Ngizomthola noma yikanjani umgadli, ukhona nje engimugaqele kodwa kuzoncika ekutheni ikilabhu iyavuma yini ukumudedela. Okwamanje ngeke ngikwazi ukumusho ngoba ngihlonipha ikilabhu yakhe kwazise usanenkontileka nayo," kusho uSredojevic.
Nokho uyabancoma abadlali bakhe ngokuzinikela.
"Uma sizoqhubeka kanjena sizowaqoqa amaphuzu emidlalo yethu. Abanye bazophaphama sesihambe kakhulu," esho.